Astaamaha, guryaha iyo noocyada macdanta | Saadaasha Shabakadda
Waa macquul in mararka qaarkood aad baratay macdanta iyo astaamahooda. Kuwa badan baa jira noocyada macdanta mid walbana qaab baa loo soo saaraa oo wuxuu leeyahay astaamo kala duwan. Bini'aadamka wuxuu u adeegsadaa macdanta adeegsiyo kala duwan. Macdantu waa wax aan ka badnayn shey adag oo aan dabiici ahayn oo ka kooban waxyaabo dabiici ah iyo qaacido gaar ah oo kiimiko ah.
Maqaalkan waxaan diirada ku saari doonaa noocyada kala duwan ee macdanaha ka jira Dunida iyo waxa ay qabtaan. Ma rabtaa inaad wax badan ka ogaato? Kani waa qoraalkaaga 🙂
1 Astaamaha qeexaya macdanta
2 Sidee loo kala saaraa hal macdan iyo mid kale
3 Guryaha macdanta
4 Noocyada macdanta
Astaamaha qeexaya macdanta
Waxa ugu horeeya ee ay tahay inaan ka fiirsanno macdanta ayaa ah inay tahay wax aan firfircooneyn, cunsur aan dabiici ahayn, yacni nolol maleh. Si macdantu u noqoto macdan, dhawr shuruudood waa in la buuxiyo. Midka hore ayaa ah inuusan ka imaan karin noole kasta ama haraaga noolaha. Kuwani waa walxo dabiici ah oo laga soo saaro Dhulka. Ahaanshaha dabiiciga ah, waa in laga soo saaraa dabiiciga oo aan loo abuurin si dabiici ah.
Arrinta macdanta waxaa ku yaal ganacsi badan. Waxaa jira dad ku been abuura macdanta macdanta kale ee loo yaqaan 'synthetics' ee ay iyagu iskood u sameystaan ​​si ay uga iibiyaan iyadoo ay kharashka ka bixinayaan dadka aaminsan awoodda macquulka ah ee macdanta Tusaale cad waa labradorite, quartz, iwm.
Qaaciddada kiimikada ee macdanta waa in la hagaajiyaa. Waxay ka kooban tahay molikuyuullo iyo atomyo loo qaabeeyey qaab go'an mana ahan in wax laga beddelo. Laba macdano ayaa ka koobnaan kara isla atamka iyo molikiyuullada laakiin waxay leeyihiin saami kala duwan. Tusaale waxaa u ah cinnabar. Macdantaani waxay leedahay qaaciddada kiimikada ee HgS. Taas macnaheedu waxa weeye in ay ka kooban tahay maaddooyinka meerkurida iyo baaruudda. Si cinnabar u u ahaato macdan run ah, waa in laga soo saaraa dabeecada oo ay noqotaa mid aan dabiici ahayn.
Sidee loo kala saaraa hal macdan iyo mid kale
Markaad shaki gasho, waxaa jira astaamo naga caawin kara inaan kala saarno noocyada qaar ee macdanta iyo kuwa kale. Waxaan xasuusnaano in macdan kastaa ay leedahay astaamo ka dhigaysa mid ka duwan kana duwan kuwa kale. Waxaan eegaynaa maxay yihiin astaamaha inaga caawin kara inaynu kala saarno macdanta kaladuwan.
Midka koowaad waa in la ogaado in aan ka hadlayno iyo in kale A crystal. Waxaa jira macdano iyagu kristantar ah oo iyagu asal ahaan ka soo jeeda. Sida iska cad maahan muraayad la mid ah tii aan u baran jirnay inaan aragno, laakiin waxay leeyihiin qaab polyhedral ah, wejiyo, geesaha iyo geesaha. Waa in la sheegaa in macdanta badankood ay yihiin kiristaalo qaab dhismeedkooda.
Caadaysigu waa qaab ay inta badan leeyihiin. Waxay kuxirantahay heerkulka iyo cadaadiska ay ku samaysan yihiin, macdanta waxay leedahay caado ka duwan tii hore. Waa qaabka ay caadi ahaan u leeyihiin.
Midabka waa muuqaal si fudud loo kala garan karo. Macdan qodayaal kastaa waxay leeyihiin midab kala geddisan oo naga caawin kara inaan ogaanno kan kee ah. Waxa kale oo jira kuwo aan midab lahayn oo hufan.
Iftiin Waa dabeecad kale oo inaga caawin karta inaan ogaanno noocyada macdanta. Mid waliba wuxuu leeyahay nuur ka duwan. Waxaa jira iyaga oo leh macdan, naas-nuujin, matte ama lugaha adamantine.
Cufnaanta waxaa loo arki karaa wax fudud. Waxay kuxirantahay cabirka iyo cufka macdanta kasta, waxaad si fudud ku ogaan kartaa cufnaanta. Macdanta ugu cufan ayaa yar yar oo culus.
Macdanta ayaa leh sifooyin u adeega inay kala soocaan oo soo saaraan noocyo badan oo iyaga ka mid ah. Mid ka mid ah astaamaha ugu waaweyn ee ay ku kala soocan yihiin waa adkaansho. Laga soo bilaabo kii ugu adkaa uguna jilicsanaa iyaga ayaa lagu kala saaraa miisaanka Mohs.
Hanti kale waa jajabnaan. Taasi waa, sida ay u fududahay ama u adag tahay in lagu jabiyo hal dharbaaxo. Adag waa inaan lagu khaldin jilicsanaanta. Tusaale ahaan, dheeman waa macdanta ugu adag tan iyo markii aan la xoqin karin ilaa ay la socoto dheeman kale. Si kastaba ha noqotee, aad ayey u fududahay in la jabiyo markii la garaaco, maadaama ay aad u jilicsan tahay.
Markay macdantu jabto waxay u jajaban kartaa si aan caadi ahayn ama waxay u soo saari kartaa si joogto ah. Marka tan labaad dhacdo, waxay ka dhigan tahay inay leeyihiin qaybo isku mid ah. Si loo lafaguro macdanta gebi ahaanba sifooyinka iyo sifooyinka oo dhan waa in lagu xisaabtamo.
Miisaanka Mohs waa kuwan soo socda, oo ka bilaabma adayga ugu weyn ilaa kan ugu yar:
Si loo fududeeyo fahamka, waa in la yiraahdaa adkeysigu wuxuu ka kooban yahay awoodda xoqitaanka. Markan oo kale, talc waa xoqi karaa qof walba, laakiin ma xoqin karo cidna. Quartz waxay ka xoqi kartaa liistada inteeda kale 6 ilaa hoos, laakiin waxaa kaliya lagu xoqin karaa topaz, corundum, iyo dheeman. Dheeman, oo ah midka ugu adag, cidina xoqin kari mayso waxayna xoqin kartaa qof walba.
Qaabka ay macdantu ugu muuqato dabeecadda ayaa ka caawisa iyaga inay aqoonsadaan laba kooxood oo waaweyn. Dhinac, waxay yihiin macdanta dhagaxa sameysa iyo, dhanka kale, macdanta macdanta.
Tusaalaha nooca koowaad ee macdanta waa granite. Granite waa dhagax ka kooban saddex nooc oo macdan ah: quartz, feldspars, and mica (eeg Noocyada dhagaxa). Nooca labaad waxaan leenahay macdano bir ah. Waa macdan sababtoo ah waxaa si toos ah looga helaa birta. Macdanta birtu waxay leedahay maaddo sare oo bir dabiici ah iyo mid saafi ah, sidaa darteed si toos ah ayaa looga soo saari karaa. Waa in la yiraahdaa macdantu waxay u muuqataa inay leedahay wasakh.
Waxaa ka mid ah macdanta dhagaxa samaysa:
Kuwani waa koox macdano ah oo sameeya dhagaxyo aad u tiro badan. Waxaan helnaa biotite, olivine, quartz iyo orthoose.
Ma jiraan silsilado. Macdantaani malaha silikoon waana gypsum, halite iyo calcite.
Dhinaca kale, waxaan haynaa macdanta macdanta oo si toos ah looga soo saaro cunsurka. Is urursiga ballaaran ee hal nooc oo macdan macdan ah ayaa lagu magacaabaa dhigaal. Si looga helo birta macdanta, nijaasta ayaa loo kala saaraa iyada oo la jajabinayo ka dibna dib uga dhalaalaa heerkulka sare. Sidan ayaa loo sameeyaa ingots-yada caanka ah.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad waxbadan uga fahmi karto noocyada macdanta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ciencia » Noocyada macdanta
The "meeraha" Pluto